Joornaalka No. 9 Gugii 2020 - Hay'adda Abaalmarinta Abaalmarinta
Bogga ugu weyn Joornaal No. 9 Gugii 2020
Joornaal No. 9 Gugii 2020
Ku soo dhowow guga! Waxaan rajeyneynaa inaad ku raaxeysaneysid jawiga quruxda badan isla markaana aad si wanaagsan ula qabsaneysid deegaanka la yaabka leh ee aan dhammaanteen isku helayno xilligan Guga. Ammaan ahaw
Hay'adda 'Reward Foundation' waxaan ku qaadanay fursadda farqiga ku qoran xusuus-qorkeena si aan ula qabsanno shaqooyin kala duwan oo ay ka mid tahay warsidahan soo daahay. Ahem! Waa kuwan waxqabadyada noo mashquuliyay bilihii la soo dhaafay: ku soo bandhigidda aqoon isweydaarsiyo iyo wadahadallo meelo kala duwan ah; barashada cilmi baaris cusub; soo saarista waraaqo cilmi baaris ah nafteena; ka hadlida iskuulada iyo suxufiyiinta isla markaana qorsheynaya istiraatiijiyadeena sanadka soo socda. Madadaalo, baashaal iyo xiiso badan.
Marka lagu daro waxyaabaha muhiimka ah ee wararka, waxaan ka dooranay boogag yar bilihii la soo dhaafay haddii ay dhacdo inaad ku dhaafto bogga. Waa kuwan iskuxiraha liiska ugu muhiimsan ee Blogs.
Way fududahay in waqti firaaqo ah lagu lumiyo jahwareerka iyo iftiiminta dhinaca taban ee waqtigan. Marka si wax looga qabto isku dheelitirka xoogaa halkan waxaa ah dhowr ereyo oo fikradaheenna si wanaagsan loogu rido:
"Waxaan kugu jeclahay neefta, dhoolla caddaynta, ilmada noloshayda oo dhan!" by Elizabeth Browning
"Jacaylku waa waxa aan haysano oo dhan, sida kaliya ee aan isku caawin karno." Waxaa qoray Euripides
Jacaylka aan bislaan ayaa leh: 'Waan ku jeclahay maxaa yeelay waan kuu baahanahay.' Jacaylka bislaaday ayaa leh: 'Waan kuu baahanahay maxaa yeelay waan ku jeclahay.' “ Waxaa qoray E. Fromm
DURRELLaking News for guga 2020
Dukumiinti cusub oo ay waalidiinta Waalidku ka qoreen Saameynta Porn ee Carruurta
Fadlan iska qor Vimeo si daawade trailer loogu talagalay dokumentigan cusub ee ay sameeyeen waalidiinta New Zealand. Hooyadu waa Scottish.
Filimku waa bilaash, laakiin daawashada fiidiyowga hoose wuxuu ku kacayaa xoogaa doolar. Rob iyo Zareen waxay tan ku sameeyeen miisaaniyad kabo isticmaal ah iyagoo adeegsanaya xirfadahooda iyo go'aan qaadashadooda, sidaa darteed fadlan iibso haddii aad awoodid. Mahadsanid.
BBC Scotland: Sagaalka - Dhibaatada Galmada
Bishii Disembar ee sanadkii hore, BBC Scotland The Nine ayaa wareysatay barnaamijka 'TRF' ee Mary Sharpe oo ku saabsan buuqa ka soo baxa kiisaska qalalaasaha galmada ka dib geerida Grace Millane ee New Zealand. Eeg wareysiga halkan.
Mary Sharpe, Gudoomiyaha Hay'ada Abaal-marinta iyo wariye Jenny Constable, oo ay weheliso marti-sharaf istuudiyaha 'The Nine' Martin Geissler iyo Rebecca Curran
Kiiskan murugada leh ma ahan mid go'doon ah oo ka dhib badan sidii markii hore ay u muuqatay. Sida laga soo xigtay sahanka 2019 ee ay daabacday The Sunday Times labo jibaar dumarka da'da yar ee ka yar da'da 22 sano (Jiilka Z) waxay ka qaadaan galmada xunxun iyo BDSM (addoonsiga, xukunka, sadism iyo masochism) oo ah qaababka ay ugu jecel yihiin galmada marka loo eego ragga dhalinyarada ah. Tani waxay dhibaatooyin aad u weyn u leedahay maxkamadaha kiisaska kufsiga markii la tixgalinaayo in uusan jirin ogolaansho run ah ee qalalaasaha galmada, oo ah nooc BDSM.
Maalinta Jacaylka ee Belfast
Waxaan ku qanacnay soo dhaweynta diiran ee aan ka helnay Maalinta Jacaylka ee Lisburn, oo u dhow Belfast. Waxaan u nimid inaan ka qeyb galno Isbuuca Caafimaadka Galmoodka Waqooyiga Ireland. Waxaa ka soo muuqday xirfad-yahanno xirfadlayaal ah guud ahaan daryeelka caafimaadka iyo waaxda shaqada bulshada. Waxaan soo bandhignay mowduuca "Filimka Internetka iyo Jiritaanka Jinsiga." Mar labaad, kuma aanan yaabin inaan ogaanno in GP-yo fara badan, rag iyo dumarba ah, aysan ka warqabin xiriirka ka dhexeeya heerarka sare ee isticmaalka xun ee qaawan ee internet-ka iyo galmada ragga. Waxay jeclaan lahaayeen inay dib noogu soo celiyaan wax dheeraad ah.
TRF Xarunta Lagan Valley Civic, Lisburn ee Waqooyiga Ireland.
Dhageyso khubarada balwadaha
Runti waxay kugu fiicnaan laheyd waqtigaaga inaad waqti qaadato dhagayso oo baro labadan borofisar ee cilmu-nafsiga. Kent Berridge oo ka socda jaamacadda Michigan, USA iyo Frederick Toates oo ka socda jaamacadda Open University ee UK ayaa hogaaminaya khubaro ku takhasustay balwadda. Maxaa keena dhiirigelinta, raaxada iyo xanuunka? Aad ayey muhiim u tahay in la fahmo sida carruurteenna iyo dhallinyarteennu ay ula qabsadeen qaawanimada, ciyaaraha, khamaarka iwm. Waa tallaabada ugu horreysa si aan uga caawinno iyaga inay u noolaadaan nolol caafimaad leh mustaqbalka.
Aqoonyahanada Kent Berridge iyo Frederick Toates
Waxaan nasiib u yeelannay inaan maareyno hal aqoon-isweydaarsi maalintii ugu dambeysay oo dhan 17th Bishii Maarso magaalada Kilmarnock ka hor intaan xannibaadda la qaadin. Mawduuca wuxuu ahaa "Filimaanta Internetka iyo Rabshadaha Jirka".
Xaqiiqada xiisaha leh ee ka soo baxday aqoon-isweydaarsi hore ee Golahaan ayaa ahaa in dambiilayaasha galmada iyo kuwa lagu soo eedeeyay rabshada guriga in si ka duwan ula dhaqmaan masuuliyiinta sharciga. Tusaale ahaan, waxaa jira aalad qiimeyn oo kaladuwan oo nooc walboo xaalad ah mana aha arinta lacala ugaarsiga qaawan ee waligiis. Adoo sameeynaya xiriiriye ku saabsan sida isticmaalka qasabka ah ee qaawan ee internet-ka uu u horseedi karo go'aan xumo, gardarro iyo jahwareer ka timaada adeegsadayaasha qaarkood, shaqaalaha bulshada ee garsoorka dambiyada waxay ka heli karaan waxqabadyo wanaagsan oo gacan ka geysanaya yareynta dhacdooyinka rabshadaha qoyska. Isticmaalka porn-ka culus wuxuu kuu horseedi karaa rabshad guriga iyo dembi galmo. Waxaan rajeyneynaa inaan la shaqeyno golahan mar dambe sanadkaan.
Madadaalo, fiidiyow gaaban oo loogu talagalay carruurta da 'kasta leh!
Abaalgudka Abaal-marinta wuxuu qayb ka yahay isku-xirka ururrada. Waxaan u ololeynaynaa dowladda UK inay hirgaliso sharciga xaqiijinta da'da ee loogu talagalay goobaha filimka leh. Fadlan u soo dir fiidiyowgan carruurta, waalidiinta, ururada dhalinyarada, xildhibaanada, saameynta warbaahinta bulshada inta aad awoodid si aad u taageerto farriinta. Halkan ka hel: https://ageverification.org.uk/
"Capping" waxay ku saabsan tahay carruurta inay khiyaaneeyo inay sameeyaan wax aan habooneyn, tusaale ahaan, iyagoo nool. Markaa iyada oo aan ilmuhu la ogeyn, sawirrada ama duubitaannada habdhaqan aan habooneyn ayaa 'la qabtay'. Waxaa markaa loo isticmaalaa si wax u dhumis ama galmo loogu sameeyo dhibbanaha. Faraxumeeyeyaasha iyo kuwa kale ee ugaarsiga galmada waa kuwa iska furan laakiin sidoo kale waa dadka aan gabi ahaanba dan ka lahayn galmada carruurta. Kaliya waxay raadinayaan qaabab fudud oo ay lacag ama alaab ku helaan. Tani waxay noqon kartaa mid aad u murugo leh carruurta aan fikir ka hayn sida loola tacaali karo khatarahaas.
Big Porn Wuxuu Doonayaa Inuu Ka Faa'iideysto Aafada
"Waqti qalalaase, warshadaha ladagaalanka ku darsaday weli silica aadanaha. Pornhub waxay ka dhigtay maaddo bilaash ah aduun dhan. Daawashada iyo iibka ayaa dhagtay natiijada…
“Filimkii 1980-kii Diyaaradeed!, maareeyaha taraafikada hawada Steve McCroskey wuxuu la halgamayaa inuu hago diyaarad ay shaqaalihiisu dhamaantood ku dhinteen sunta sumowga ilaa badbaadada. "Waxay u egtahay inaan qaatay khalad toddobaad ah si aan u joojiyo sigaar cabista," ayuu yidhi, isagoo si dhidid leh u dhidbaya. Kadib, wuxuu raaciyay in sidoo kale ay ahayd khalad isbuuc khalad ah "joojinta amphetamines" ka dibna mar labaad "isbuuc khalad ah in la joojiyo xabagta xiiqda."
Waalidku had iyo jeer waxay na waydiiyaan waxa dawladaha ay tahay inay qabtaan si loo yareeyo halista waxyeelada internetka ee carruurtooda. Blog-gu wuxuu soo bandhigayaa qaar ka mid ah ciyaartoydii ugu muhiimsanaa, oo ay ku jiraan xulufada caalamiga ah ee WePROTECT.
Riix halkan si aad wax uga sii ogaato wax ku saabsan Isbaheysiga Caalamiga ah iyo kooxda "Shan Indhaha".
Waalidku waa laga yaabaa inay ka yaabaan inay ogaadaan in kasta oo galmada isku ogolaashaha ahi yahay mid baahsan, galmada qasabka ayaa sidoo kale caadi ah. Cilmi baaristu waxay muujineysaa inay saameyn ku leedahay daawashada sawirada qaawan maadaama ay dhiirigelineyso xoogsheegashada, kadeedis iyo khiyaano. Boggan waxaa ku jira boggag noo gaar ah oo ku saabsan galmada iyo mas'uuliyadda sharciga ah. Waxay kaloo leedahay maqaal xiiso leh oo ka soo baxa wargeyska The Guardian.
Tilmaanta waalidiinta ee bilaashka ah ee Porn Internetka
Ku wada shaqeynta guriga inta lagu jiro aafada, carruur badan oo si fudud u heli kara internetka ayaa heli doona waxyaabaha qaangaarka ah. Tani waxay umuuqan kartaa madadaalo aan dhib lahayn, laakiin saameyntu waxay soo muuqan doontaa waqtigeeda. Haddii aad waalid tahay wax ka baro inta aad kari karto sida loogala hadlo carruurtaada filimada qaawan. Ma ahan wax la mid ah porn-kii hore. Eeg annaga Tilmaamaha Waalidiinta ee Bilaashka ah ee Filimada Internetka fiidiyowyo kala duwan, maqaallo, buugaag iyo ilo kale. Waxay kaa caawin kartaa inaad yeelato wadahadaladaas adag.
Abaalmarinta Abaal-marinta on Twitter
Fadlan raac barnaamijka 'Abaalka' Reward Foundation on Twitter @brain_love_sex. Halkaas waxaad ka heli doontaa cusboonaysiin joogto ah oo ku saabsan cilmi-baaris cusub iyo horumarin ku saabsan arimahan sida ay muuqdaan.